Elaela tsy heno sy tsy hita an-tsehatra Ralanto. Fantatra kosa fa eo am-panomanana fatratra ny fiverenany, miaraka amin’ny zava-baovao, izy. “Revy akostika”, seho hafa noho ny mahazatra, no hotontosainy ny asabotsy 30 jolay izao, etsy amin’ny IKM Antsahavola.
Tsy miova amin’ny nahafantarana azy, dia ny fivoizana ny akostika amin’ny alalan’ny fampiarahana ny gitara sy ireo karazan-javamameno malagasy Ralanto. Hanantombo kely anefa izany, satria misy ny trandraka mozika vaovao nentiny, izay asehony an-tsehatra voalohany amin’io fotoana io.
Antony iray nanasan’ity mpanakanto ity an’i Malm, mpanakanto tanora mpihira ao amin’ny tarika Martiora Freedom, izany. Hitan-dRalanto fa misongadina amin’ireo mpanakanto i Malm, ka nahatonga azy nanan-kevitra ny hampiaraka talenta aminy. Misy hira efatra eo no iarahan’izy mirahalahy. Amin’ny asabotsy ny fotoana ho an’izay liana…